Mayelana NATHI - Shijiazhuang Histe Electric Co., Ltd.
Ngaphambi kuka-2008, imikhiqizo yethu eyinhloko ingu-110 kV nomshini wokuhlukanisa amandla kagesi aphansi, okuphuma minyaka yonke ngamakhulu ezinkulungwane zamaqoqo, wenziwe ngentambo yelanga engena ku-silicon irabha futhi ithuthukiswe ngochwepheshe benjoloba abadumile, amakhemikhali nochwepheshe begridi ngeminyaka eyisikhombisa ucwaningo kanye nokuhlolwa. Imikhiqizo, edale amarekhodi kwilungelo lokuzimela. Ngemuva kokuhlolwa yi-Wuhan High-Voltage Research Institute State Grid Corporation yase China, Isikhungo Sikazwelonke Sokulawulwa Kwekhwalithi kanye ne-Test of Insulator ne-Surge Arrester, ngamazinga kazwelonke GB11033, GB5598, JB5892-1991, JB / T8952-1999, imikhiqizo ibilokhu kuthathwa njengokufanelekile ukuhlangabezana namazinga kazwelonke kuzo zonke izici.
Phakathi kwabo bonke abasebenzi abangama-256, abantu abaneziqu zobudokotela noma iziqu ze-bachelor's account for 7. “Namathela emisha yebhizinisi; Funa inqubekela phambili yobuchwepheshe; Fakela umkhiqizo osezingeni eliphakeme ”wumgomo wethu sonke lesi sikhathi.
Inkampani yethu ibilokhu isendaweni ehamba phambili ekhaya ngenkolelo yayo yokuphatha yesimanje, amandla wezobuchwepheshe aqinisiwe, Yenza ukuphathwa kwesayensi futhi ibhekele izidingo ze-ISO9001:2000 ejwayelekile, isitifiketi sekhwalithi ephelele kanye neziqu, inqubo yokuhlola esezingeni eliphakeme kanye nokugunyazwa kwangemva kwenkonzo.
Ngibheke phambili ekutholeni ukubambisana nawe kungekudala.
Ubonile ukukhula kwethu
Sekuyiminyaka eyi-10, Inkampani yethu ekwakhiweni kwegridi yamandla kazwelonke kanye ne-retrofit inikeza izigidi zokufakwa kwekhebula neminye imikhiqizo yenethiwekhi esekelayo. ngemuva kuka-1998 inkampani yocwaningo nentuthuko i-500kV kanye nama-insulators ahlanganisiwe we-voltage ephansi, i-35kV kanye ne-voltage ephansi ye-zinc oxide surge arrester, ihlukanise iswishi, i-fuse yokuyeka, ishubhu kagesi ibhasi-ibha, i-shed booster, i-Cable sheath voltage limited (ibhokisi), i-wall bushing, njll It uye waqaphela imikhiqizo kagesi kusuka ingcindezi low kuya umfutho ophakeme kanye ultrahigh ingcindezi ushintsho. ; kusuka ekushadweni kuya kokuhlukahluka, Kubonisa ukubukeka kwenkampani ekusaseni, ukuze yakhe isethi ephelele yabasebenzisi bezinsizakalo isitimela esikhulu somcabango. Futhi senza umnikelo omkhulu kumandla kagesi, ujantshi, uphethiloli, izimayini zamalahle nohlelo olukhulu lokuhlinzekwa kwamandla kagesi.
Ngesikhathi sakamuva siphinde senze izesekeli ezincane zekhebula (amasethi ayi-100, isikhathi sokulethwa yizinsuku eziyi-15), i-insulator (izingcezu ezingama-630, isikhathi sokulethwa sezinsuku eziyi-15), iswishi ehlukanisa (iqembu lama-300, isikhathi sokulethwa sezinsuku ezingama-45), ibhizinisi lokukhiqiza I-saturation degree ingama-40%, amandla okwenza le bhidi umkhiqizo.